ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပျောက်ဆုံးနေရတယ်လို့ခံစားနေရချိန်ဆိုရင် ဒီစာကိုဖတ်ပါ
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပျောက်ဆုံးနေရတယ်လို့ ခံစားနေရချိန်ဆိုရင် ဒီစာကိုဖတ်ပါ
ကျွန်တော်တို့တစ်ဦးချင်းစီက ဘဝကိုယ်စီကိုဖြတ်သန်းသွားတဲ့အခါ ရှုံးနိမ့်ခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းနဲ့ ကိုယ်သွားရမယ့် လမ်းကြောင်းပျောက်ဆုံးခြင်းတွေကို မလွဲမသွေခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ ကျွန်တော်တို့ ဦးတည်ချက်ပျောက်ဆုံးနေသလိုဖြစ်ပါစေ အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုမှာ နောက်ကျနေသလိုဖြစ်နေစေ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကလမ်းကြောင်းတွေမှာပိတ်ဆို့ထားသလိုဖြစ်နေရင်ဖြစ်ပါစေ ကျွန်တော်တို့တကယ့်ကို တိတိကျကျ သတိရနေဖို့အရာတွေရှိပါတယ်။
မိတ်ဆွေတို့ဘဝမှာ မိတ်ဆွေတို့ရေတွက်နိုင်တာထက် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဦးတည်ချက်တွေပျောက်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ “ကျွန်တော်တို့ ဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အကဲဖြတ်ခြင်း မဟုတ်ပဲ ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလုပ်ဆောင်နေတယ်၊ လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့၊ အရှုံးမပေးသေးဘူးဆိုတဲ့အချက်ကို လက်ခံထားဖို့လိုပါတယ်။
ဒီတော့မိတ်ဆွေကိုယ့်ကိုကိုယ်ပျောက်ဆုံးနေပြီ ဘဝကြီးက အဓိပ္ပါယ်မရှိတော့ဘူးလို့ ခံစားလာရရင်
” ငါဘာဖြစ်ချင်နေတာလဲ? ဘာဖြစ်နိုင်လဲ”ဆိုတာကို အရင်စဉ်းစားပါ။
အဓိကက လျောက်နေဖို့ ဆက်လျောက်နေဖို့ပါပဲ.
ဘဝကို စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်စေတဲ့အရာဆိုတာ” အဖြေတွေအားလုံးကိုသိဖို့မဟုတ်ပဲ ဦးတည်ချက်အချို့နဲပန်းတိုင်အချို့ရှိဖို့လိုရုံပဲဖြစ်တယ်။ ဒါတွေကို ခပ်ရေးရေးလေးမြင်နေရရုံနဲ့ကို ဘဝကလုံလောက်နေပြီ။
အဲ့ဒီပန်းတိုင်နဲ့ရည်မှန်းချက် ရေးရေးလေးကိုသွားဖို့ဘာတွေလိုအပ်လဲ အလွယ်ဆုံးအရာက ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကို စဉ်းစားပြီး အလွယ်ဆုံးကနေစလျောကိပါ။
အနာဂါတ်တစ်ခုကို ဘယ်လိုဖြစ်ရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့တာတွေကမလုံလောက်ပါဘူး။
အခု” ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်သမျှသည် ကျွန်တော်တို့ကို အလင်းရောင်တစ်ခုအဖြစ်လမ်းပြပြီး ဦးဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်၊ အသက်ရှင်ရတာထိုက်တန်တယ်ဆိုတာကိုပြပါလိမ့်မယ်”.
တခါတလေ ဘာမှမဟုတ်တဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကြောင့်လည်း ကျွန်တော်တို့စိတ်ဓါတ်ကျနေတတ်ကြပါတယ်။ လူတွေဟာတခြားလူတွေကို သူတို့စိတ်ဆင်းရဲတာတွေ စိတ်ညစ်တာတွေ စိတ်ဓါတ်ကျတာတွေကို ထုတ်ပြမယ့်အစား ပျော်ရွှင်တာ အဆင်ပြေနေတာတွေကိုပဲ ထုတ်ပြနေကြတာပါ။ ဘယ်သူမှပြီးပြည့်စုံပြီး ပြဿနာတွေကင်းစင်တဲ့ဘဝကို မပိုင်ဆိုင်ထားကြပါဘူး။
ဒီတော့မိတ်ဆွေကိုယ့်ကိုကိုယ်ပျောက်ဆုံးနေပြီ ဘဝကြီးက အဓိပ္ပါယ်မရှိတော့ဘူးလို့ ခံစားလာရရင်
လူတိုင်းမှာ ရှုပ်ထွေးမှုတွေ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေ အတာားအဆီးတွေ မှန်းဆထားလို့မရတဲ့ကျရှုံးမှုတွေနဲ့ပြည်နေတယ်ဆိုတာ မင်းဘယ်တော့မှ မမေ့လိုက်ပါနဲ့။
ပင်လင်ပြင်မှာဇိမ်ခံသင်္ဘောကြီးနဲ့ရွက်လွှင့်နေတဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေးကြီးရဲ့ရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုမီးမျိုးတွေလောက်မြိုက်နေလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့သိနိုင်ကြပါ့မလား?
အဖြေအားလုံးကို သိဖို့ ငါတို့ရှင်သန်နေရတာမဟုတ်သလို အဲ့ဒီ ပြဿနာတွေအားလုံးကိုတွက်ချက်ပြဖို့ ငါတို့ရှင်သန်နေကြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသတိရဖို့။
ငါတို့ရှင်သန်နေရခြင်းရဲ့ အဓိက အချက်က…
” လက်ရှိပစ္စုပန်အချိန်မှာ ငါတို့မှန်းဆမထားနိုင်တဲ့အရာတွေကြားထဲ ဘယ်လို ပျော်ရွှင်အောင်နေကြမလဲ ဆိုတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုရှာဖွေကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်”
” ဒီတော့ အတိတ်ထဲက အမှားတွေ နောင်တတွေကိုလည်း မတွေးနဲ့။
လက်ရှိကိုယ်ရနေတဲ့အချိန်လေးကို အာရုံစိုက်လိုက်ပါ။ ကိုယ့်လက်ထဲမှာ ခုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အချိန်လေးကို အကောင်းဆုံးလက်တွေ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်ပါ။
ပျော်ရွှင်မှုရဲ့ အနှစ်သာရဟာ ပစ္စုပန်မှာပဲရှိတယ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မမေ့လိုက်ပါနဲ့။
မင်းကိုမင်း ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ ယုံကြည်ရင် ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ယုံကြည်ပါ။
တခြားသူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုတွေ ခရီးစဉ်တွေကို မင်းကိုယ်မင်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီး အားမငယ်နဲ့။ စိတ်ဓါတ်မကျနဲ့။
မင်းရောက်နေတဲ့နေရာကိုပဲ ယုံကြည်ပါ။ ဒီမယ် သေချာငါပြောမယ်။ တကယ်တော့ “မင်းရောက်နေတဲ့နေရာက မင်းရဲ့အောင်မြင်မှုပါပဲ”။
မင်းရဲ့ပင်ကိုယ်စိတ်က ပြောနေတဲ့အတိုင်းလိုက်လျောက်ပါ၊ အဲ့ဒီစိတ်ထဲက ပဲ့တင်သံတွေကို ယုံကြည်ပြီး အခြားလူတွေဘယ်လိုပဲပြောနေကြသည်ဖြစ်စေ မင်းရဲ့စိတ်ကပြောတဲ့ ယုံကြည်တာနောက်ကိုလိုက်ရင်း လမ်းကြောင်းမှန်ကို ခေါ်ဆောင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါ။
“ငါတို့ဖြတ်သန်းနေတဲ့ ဘဝဆိုတာ “တစ်ကယ်တော့ အမှားလည်းမရှိ အမှန်လည်းမရှိ သင်ခန်းစာတွေ အတွေ့ကြုံတွေနဲ့ဖြတ်သန်းနေတဲ့ ခရီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါ၏”လို့တွေးကြည့်ပါ၊ ဒါကြောင့် “ကျနေတဲ့စိတ်လေးကို ပြန်ကောက် လျောက်….ဆက်လျောက်…လျောက်သလောက်တော့ရောက်မှာပါ”..